Andro iraisam-pirenena ho an’ny tanora
Tsy diso anjara tamin’ny fankalazana ny teto Toamasina
Tonga nanotrona ny fanamarihana sy ny fankalazana ireo fikambanana manabe tanora sy ireo ONG misy eto Toamasina. Ny lohahevitra tamin’ity taona ity ny hoe: � fahasalamana ara-tsaina ny tanora �.
Tany Ambalavao, faritra Matsiatra ambony,ny fankalazana nasionaly izay notarihin’ny Minisitrin’ny tanora sy ny fanatanjahan-tena ary ny halalavoly, Atoa Jean Anicet ANDRIAMOSARISOA, � Tanora milamintsaina sy tomady fanohitra ny fampandrosoana � no lohahevitra tamin’ny fankalazana nasionaly.
Raha ny teto Toamasina dia, hetsika telo no nentina nanehoana ny fankalazana, ny fampiratina, ny fijerena sary mihetsika momban’ny zaza ao ambohoka hatramin’ny fahalebiazany ary ny hetsika fampisehoana ara-pialamboly (rouleur - skett bord ),manoloana ny lapan’ny tanana.
Ny tanjona dia fanehoana ho an’ny mponina Toamasina ny fisian’izany andro iraisam-pirenena hoan’ny tanora izany. Io no nambaran’ny talemparitry ny tanora sy ny fanatanjahan-tena ary ny halalavoly Atoa Laurent RABARIVELO.
(69) Prud′Homme RAKOTOSON : 13-08-2014 - 09:30